Ifulethi lomndeni elibanzi nelihlanzekile - I-Airbnb
Ifulethi lomndeni elibanzi nelihlanzekile
Luisago, Lombardia, i-Italy
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Daniele
"I-Appartamento Famiglia" ilungele imindeni noma amaqembu: ebanzi, ihlanzekile futhi ithokomele. Itholakala endaweni ethulile nehlala abantu eseduze nedolobha lase-Como futhi itholakala kahle ukuvakashela ichibi elihle le-Como namadolobha anjenge-Lugano ne-Milan.
Efulethini uzoba nombhede olala abantu ababili, amakamelo okulala amabili anemibhede eyisithupha elala umuntu oyedwa, futhi uma kudingeka umbhede wezinsana neyunithi yokushintsha ingane iyatholakala. Amathawula nelineni yombhede kufakiwe.
Igumbi lokugezela elineshawa linomshini wokuwasha ozowusebenzisa. Ikhishi linikezwa i-crockery, izinto zokudlela, izitsha zokupheka, futhi linefriji, i-microwave ne-toaster.
Ekamelweni lokuphumula uzothola i-TV ne-DVD player. Uzoba nesitofu se-pellet, ngaphezu kokushisisa ifulethi esivele sifakiwe.
Unama-balcony amabili nethala elinetafula nezihlalo ukuze udle ngaphandle phakathi nezinsuku ezinhle.
Ipaki elizimele lemoto nengadi yethu enhle iyatholakala ukuze uyisebenzise. Uma uhlala phakathi nenkathi yokuvuna ungazama izithelo nemifino esiyikhiqizayo engadini yethu.
ubusuku obungu-7 e- Luisago
4.75 · 72 okushiwo abanye
Indawo yendawo inezinhlobonhlobo zezindawo zokudlela ezinhle kanye ne-pizzeria ebangeni lokuhanjwa ngezinyawo njenge-La Vecia Hosteria ne-Il Pettirosso e-Luisago noma e-Capriccio e-Portichetto. Singakusiza u-ode i-pizza yokuvakasha uma ufuna ukuphumula futhi ujabulele ifulethi lakho elithokomele.
Uzothola izimakethe ezinkulu nezindawo zokuthenga ezifana ne-Eurospin ne-Lidl ezingaphansi kwamakhilomitha angu-1/.6 ukusuka kithi noma i-Iper imizuzu embalwa ukusuka emotweni.
Kunezindawo ezinhle kakhulu zemidlalo endaweni, ezihlanganisa indawo yokubhukuda e-Villa Guardia, i-Golf Club Monticello noma i-Golf Club Villa d 'Este.
Hlola ezinye izinketho ezise- Luisago namaphethelo